Ma rabtaa inaad iibiso, ku deeqdo ama dib u telefoonka Android jir ama kiniin ah? Waa in aad rabtid in ay tirtirto wixii dul saaran in aad macluumaadka gaarka ah ammaan iyo xaqiijistay. Halkan, waxaan jeclaan lahaa inaan idiin sheego 4 siyaabaha ay u tirtiri macluumaadka ku saabsan telefoonka Android ama kiniin. On Read oo ay helaan qaabka ugu wanaagsan ee sii xogta shakhsiga aad ammaan ah iyadoo aan loo eegin oo gacanta ku dhacdo.
Habka 1. Si fudud u masixi Phone Android ama Tablet
Habka 2. Ma Factory celi si masixi Xogta Phone Your Android ama Tablet
Habka 3. Si buuxda u ogolaan in Phone Android ama Tablet. Wax la soo kabsaday karaa
Habka 4. Remote masax Phone Android ama Tablet
Thanks to nooca Android ee furan, waxaad si fudud u masixi karaan xiriirada, sawiro, fariimaha, barnaamijyadooda, music, video, abuse call iyo document files ka phone Android ama kiniin. Waxaad u baahan tahay inaad waxba ma samayn, laakiin furo barnaamijyadooda sida Xiriirada, Gallery, Log, Messages (Fariin), Video, Music iyo ka badan oo la odhan jiray. Oo waxaad heli aad files aan la rabin oo iyaga tirtirto.
Easy in ay tirtirto
1. Kharash badan oo waqtiga
2. waa fududahay in la soo kabsaday ayaa files tirtiray. Eeg sida inuu ka soo kabsado files tirtiray ka Android >> .
Keddibna Factory waa hab caadi ah oo aad u badan tahay in ay isticmaalaan marka aad rabto in aad iibiso, ku deeqdo ama dib u telefoonka Android jir ama kiniin. Waxaad u malaynayso in aad u tirtiri wax walba oo ku saabsan telefoonka Android ama kiniin joogto ah oo ay sameeyaan dib warshad. Dhab ahaantii, ma ahan. Warbixannada Factory ma masixi dhammaan macluumaadka ku saabsan telefoonka Android ama kiniin. Taa ka sii daran, xogta u tirtirtaa u dayacan tahay in qaar ka mid ah qalabka soo kabashada iyo si fudud loo soo kabsaday karo.
Ka dib oo dhan, haddii aad dhabtii doonaysid in tirtiro xogta Android via dib warshad, waxaad kala socon kartaa tallaabooyinka hoose. On telefoonka Android ama kiniin ah, u tag Settings > celi > keddibna xogta Factory .
Fiiro gaar ah: Ka hor inta aan sameeyo dib warshad, aad jeclaan fiican gurmad aad telefoon Android ama kiniin ah in ay sii xog ammaan.
Masixi ugu xogta ku saabsan telefoonka Android ama kiniin
1. Aan gebi ahaanba tirtiro xogta Android
2. waa fududahay in la soo kabsaday ayaa files tirtiray
Si aad u tirtiri phone Android ama kiniin ahaan iyo joogto, doorashada ugu fiican waa in ay ku taageeraan xirfad qalab Tirtirin Android. Wondershare SafeEraser waa qalab sida oo awood aad ku tirtiro wax walba oo ku saabsan telefoonka Android ama kiniin ah. Wax walba waa recoverable.
Wondershare SafeEraser - Ilaali macluumaadkaaga shakhsiyeed a
Tallaabada 1 . Download iyo gashato on Windows PC ama Mac Your
Si aad u billowdo leh, download version saxda ah ee Wondershare SafeEraser aad kombuutarka Windows. Waxa maamula. Connect qalabka Android inay computer isticmaalaya cable USB ah. Fadlan awood USB Debugging Mode qalabka Android marka aad isku xira.
Tallaabada 2 . Riix masixi All Data on interface ka. Markaas galaan "tirtirto" ee uu furmo suuqa si loo xaqiijiyo amarka iyo guji masixi Hadda inuu u dhaqaaqo
Talaabada 3 . Markaas barnaamijka bilaabi doonaa tirtiro dhammaan xogta ku saabsan qalabka Android, oo ay ku jiraan music, videos, sawiro, xiriirada, barnaamijyadooda, iwm
Tallaabada 4 . Kadib markii geedi socodka la dhammeeyo, raac edbinta ku saabsan barnaamijka iyo garaac Factory Data celi ama masixi All Content qalabka si ay u tirtiri goobaha nidaamka.
Faa'iido: Gebi tirtiri telefoonka ah Android ama kiniin. Wax walba waa recoverable. Qasaarooyinka: Ma lacag la'aan ah.
Waaba intaasoo aad telefoon Android ama kiniin ah waa in la soo xaday, oo aad u gaarka ah in la sii daayo karaan? Isdeji. Waxaa tahay barnaamijyadooda badan oo tirtiri kartaa telefoonka Android ama kiniin fog. Ka mid ah, Manager Device Android taagan. Tani app smart loo abuuray by Google, kaas oo aad u saamaxaaya in ay u tirtiri dhammaan macluumaadka ku saabsan telefoonka Android ama kiniin ah, dib password screen qufulka, iyo raad meesha aad telefoon Android ama kiniin.
Eeg sida loo isticmaalo Manager Device Android >>
Faa'iido: fog laga tirtiro xogta Android Qasaarooyinka: Xogta tirtiray laga yaabaa in qaar ka mid ah qalab u nugul kabashada. u
Sidee si ay u gudbiyaan iCloud Xiriirada in ay Android
> Resource > Android > 4 Siyaabaha la ogolaan in Phone Android si loo sugo Your Privacy